Iindaba-Ukuphehlelelwa kweMveliso eNtsha- RGB Dynamic Curtain LED Strip kunye neRGB yePaneli yeDVD yeDynamic
Ukuphehlelelwa kweMveliso eNtsha- RGB Dynamic Curtain LED Strip kunye neRGB yePaneli yeDVD yeDynamic
Sityhala iintlobo ezimbini zemveliso eNtsha-Dynamic Curtain RGB LED Strip kunye neModyuli yeRGB yeModyuli ye-LED.
Zonke izakhiwo zibalisa ibali, kwaye kunjalo nangaphakathi. Iipaneli zebhokisi yokukhanya ezinamandla zokwakha ezinamandla ezivela kwi-HYM Lighting zinokukunceda ukuba ulilonge elo bali. Uyilo lweemodyuli luqinisekisa ukuba lungena kuyo nayiphi na ingaphakathi, enkulu okanye encinci, ethozamileyo okanye etofotofo. Konwabele ukusebenza kwayo yonke imihla, usuku nosuku, unyaka nonyaka. Ukuba uthatha isigqibo sokutshintsha ingaphakathi lakho, unokutshintsha ngokulula ukushicilelwa kwebhokisi yokukhanyisa kunye nopopayi ngayo.
Iiphaneli ze-Dynamic ze-LED zikunceda ukuba wenze uyilo olunamandla ngeendlela ezimbini:
Yenza imizobo iphile okanye yongeze intshukumo kunye nomoya ongaqhelekanga kwiindonga nakwisilingi
Kulula kakhulu ukutshintsha umxholo wokuprinta okanye we-LED. Lungisa ukulinganisa kwesibhakabhaka eluphahleni ngokwamaxesha onyaka, umzekelo: kunamafu entwasahlobo, kunelanga ehlotyeni, kuyanetha ekwindla nakwikhephu ebusika.
IDynamic RGB Curtain LED Strip yenzuzo kulula ukuyifaka, samkela ikhadi lolawulo le-K-8000C ukwenza i-LED.
Iphaneli ye-Dynamic RGB ye-LED yamkela i-K-8000C yekhadi lolawulo ukwenza inkqubo ye-LED nge-DMX512 protocol.
Ukusukela namhlanje ukubheka phambili, ilaphu kunye ne-LED ukuba ithethe ulwimi olutsha lutshintsho lwayo olunamandla, ukophula ukuma kunye nokusekwa kwebali ngenxa ye-LED akusekho kujongana kodwa kunokuhanjiswa.
Ke inokuchaza ushicilelo kumfanekiso welaphu kwaye inikeze ukukhanya okuchanekileyo yile ndawo intsha yokukhanyisa ngasemva, oku kukuseta ivenkile, ivenkile yeWindows, igumbi lokubonisa, imisebenzi, umboniso wento entsha: ibhokisi yokukhanya enamandla, njengebhokisi yokukhanya yesiko , eyakhiwe ngesakhiwo sealuminium kunye nesimbozo esigqunywe ngelaphu, kodwa yaphule ipatheni ngasemva kwimodyuli ye-LED, inokuthi ngokufuna ukufikelela kwiziphumo ezibonakalayo zenkqubo kuyo.
Iziphumo zingumfanekiso ongashukumiyo ngokuhamba kokukhanya kwaye ukunyuka okucacileyo kuhlala kugxila kwimikhwa emitsha kunye neetekhnoloji ezintsha, ukuzenza zibenomtsalane ngakumbi. Isebenzisa isoftware-K-8000C kwinkqubo ye-LED, iinkqubo ze-LED ziya kutshintsha ngokomfanekiso wokuprinta amaxesha ngamaxesha. Ke ngoko, indlela ilula kakhulu: isakhiwo sealuminium alloy kunye nenkqubo yokukhanya okungasemva iya kuhlala injalo, kodwa ukufumana imveliso entsha, kufuneka kuphela ukutshintsha indlela izinto zesibane kunye neselfowuni ezinokuba notshintsho olunamandla kwaye ezilula ngayo sisiseko sekamva izixhobo.
Ixesha Post: Feb-16-2020